ဤသည် HTC U11 အသစ်၊ အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်သော်လည်းအသစ်ဖြစ်သည် Androidsis
ထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ terminal အသစ်ဖြစ်သော HTC U11 ကိုတရားဝင်ပြသပြီးဖြစ်သည်။ အနားယူစရာမလိုဘဲ၊ လုံးဝအသစ်ဖြစ်နေသည်။ ပထမတစ်ချက်မှာစမ်းသပ်ခြင်းကိုအခွင့်ထူးခံပြီးသားသူများက U11 သည် U Play နှင့် U Ultra တို့၏သန့်စင်ထားသောဗားရှင်းနှင့်တူသည်ဟုခံစားရသော်လည်းအသစ်ဖြစ်နေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်သတ္တုဒီဇိုင်းနှင့်အလွန်ကွာခြားသောကြောင့်ဖြစ်သည် အခြား U-series ဖုန်းများနှင့်အလွန်ဆင်တူသောမျက်စိစွဲမှတ်စေသောဖန်ဒီဇိုင်းကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်း၏အသစ်သောစွမ်းဆောင်ရည်များ၏။
နောက်တစ်ခုကကျနော်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်ပါလိမ့်မယ် HTC U11 အသစ်၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များ၊ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ ငါတို့ပြောပြီးပြီဆိုပေမယ့်ဖန်အပြင်အပြင်အထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့ကင်မရာနဲ့ Artificial Intelligence တို့အတွက်ထူးခြားတယ်။
1 HTC U11, ပြိုင်ပွဲအတွက်အဆင်သင့်ရှိသည်
1.3 Edge Sense သည်
1.4 Virtual Assistant: တစ်ခု၊ သုံးခုမရှိခြင်း
HTC U11, ပြိုင်ပွဲအတွက်အဆင်သင့်ရှိသည်
ကျွန်ုပ်အတွက်ပြင်ဆင်ထားသည့်ဇယားမှတစ်ဆင့် HTC U11 အသစ်၏သတ်မှတ်ချက်များကိုကြည့်ပြီးဤလိုင်းများအောက်တွင်သင်ရှာနိုင်သည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုနိုင်သည် HTC U11 သည်အကောင်းဆုံး Android ဖုန်းများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ပြင်ဆင်ထားသည်.
၎င်းတွင်အစွမ်းထက်သော Qualcomm Snapdragon 835 ပရိုဆက်ဆာတပ်ဆင်ထားသည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်၎င်းကိုထောက်ပြရန်အားစိုက်ထုတ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည် U11 သည်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် "သီးသန့်" Snapdragon 835 ကိုပထမဆုံးအသုံးပြုသောစမတ်ဖုန်းဖြစ်သည်အချို့သောစျေးကွက်များ၌ Exynos ပရိုဆက်ဆာများနှင့်အတူရောင်းချသည့် Samsung Galaxy S8 ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်သည်။
သူနှင့်အတူ4GB RAM နှင့်သိုလှောင်မှု 64 GB microSD ကဒ်ကို 256 GB အထိတိုးချဲ့နိုင်သည်။ သို့သော်အချို့စျေးကွက်များ၌အတည်မပြုရသေးသော 6GB RAM နှင့် 128GB flash သိုလှောင်မှုဗားရှင်းကိုရောင်းချမည်။
HTC U11 သည်၎င်း၏မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အတွက်ထင်ရှားသည်မဟုတ်ပါ 3.000 mAh ဘက်ထရီ ကြီးမားသောအခက်အခဲများမရှိဘဲခံနိုင်ရည်ရှိရန်သင့်တော်သော်လည်း၎င်းသည်သင့်အားမျှတမှုရှိစေလိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်ရှိပါတယ် လက်ဗွေဖတ်စက် ရှေ့နှင့်ပါ ရေစိုခံ IP67 အသိအမှတ်ပြုခံရသည်
စြေး $ 696 (စျေးကွက်အရ variable)
ရရှိနိုင် ဇွန်လ9မှတင်ပို့မှုနှင့်အတူ Pre- ရောင်းချမှုအတွက်ပြီးသား
အသံသို့ရောက်သောအခါ HTC U11 တွင်ကြီးမားသောစတီရီယိုစပီကာများမပါရှိသော်လည်း HTC ကမှတ်သားထားသည် BoomSound Hi-Fi စပီကာများအားအဆင့်မြှင့်ထားသည် ယခုမှာ woofer ကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီးတိုးတက်လာသော acoustic အခန်းကိုတပ်ဆင်ထားသည် ပိုမို၍ အသံကျယ်သောအသံ.
နှင့်သော်လည်း 3,5mm jack plug ကိုကင်း, HTC U11 သည်စုံတွဲတစ်တွဲဖြင့်ရောက်ရှိမည် USB-C port မှတဆင့်ချိတ်ဆက်ထားသော USonic နားကြပ် ဆူညံသံဖျက်သိမ်းခြင်းနည်းပညာနှင့်အတူ။ အကယ်၍ သင်အကောင့်ထဲ၌ adapter နှင့်အတူအခြားအကောင့်များကိုအသုံးပြုလိုလျှင်။
ဒါ့အပြင်မိုက်ကရိုဖုန်းတိုးတက်လာနှင့်ယခုပါပြီ MIC လေးလုံးစလုံးသည်လမ်းညွှန်ချက်များမှအသံများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်အတူတကွအလုပ်လုပ်ကြသည်; ၎င်းကို HTC က "အသံသွင်းနည်း" ဟုခေါ်ဆိုသည်
ကင်မရာနှင့် ပတ်သက်၍ DxOMark သည်နာမည်ကျော်ကင်မရာစမ်းသပ်အဖွဲ့မှ HTC U11 ကို ၉၀ ရမှတ်ပေးခဲ့သည်။ ၎င်းသည် DxOMark အဆင့်တွင်အမြင့်ဆုံးရမှတ်ဖြစ်သည်။ The အဓိကကင်မရာတွင် 12MP BSI အာရုံခံစနစ်တပ်ဆင်ထားသည်1,4 micron UltraPixel နှင့် UltraSpeed ​​autofocus, OIS, Auto HDR Boost နှင့်f/ 1.7 မှန်ဘီလူးများကိုကောင်းမွန်သောအလင်းနိမ့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကြေငြာနိုင်သည်။ စဉ်တွင်, ရှေ့ကင်မရာက 16MP ထိတက်ပါတယ် Auto HDR Boost နှင့် selfie spec များပါ ၀ င်သည်။
Edge Sense သည်
ဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောအသစ်အဆန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်: HTC U11 တွင်ဖိအားပေးသည့်အာရုံခံကိရိယာများကို၎င်း၏နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ထည့်သွင်းထားသည် မည်သည့် application ကိုမဆိုဖွင့်ရန် configure လုပ်နိုင်သော virtual ခလုတ်မျိုးကိုခွင့်ပြုထားသော်လည်း HTC သည်အသုံးပြုသူအား၎င်းကိုမတော်တဆဖွင့်ခြင်းကိုမည်သို့တားဆီးမည်နည်း။ စနစ်သည်ပုံမှန်တိုတောင်းသောဖိအားတစ်ခုသို့မဟုတ်ကိုင်ထားသည့်အမူအယာကိုခွဲခြားသည်။
Virtual Assistant: တစ်ခု၊ သုံးခုမရှိခြင်း
HTC U11 သည် Android 7.1 အထိရှိသည် virtual assistant သုံးမျိုး - HTC Sense Companion၊ Google Assistant နှင့် Amazon Alexaနောက်ပိုင်းကိုယူနိုက်တက်စတိတ်၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်ဂျာမနီတို့တွင်သာရနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်တရုတ်ဗားရှင်းမှာလည်းအဲဒီထဲမှာပါ ၀ င်မှာပါ အိပ်Baidu မှဒစ်ဂျစ်တယ်လက်ထောက်တစ် ဦး
HTC U11 တွင်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည် ယခုလတွင်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှအံ့သြဖွယ်ကောင်းသော Silver၊ Sapphire Blue၊ Brilliant Black၊ Ice White နှင့် Solar Red တို့ဖြင့်ပြီးဆုံးမည်ဖြစ်သည်နှင့်စျေးနှုန်းများအရ, သူတို့ရဲ့စျေးနှုန်းတွေကွဲပြားလိမ့်မယ်။
သင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှသင်ဖတ်ရှုပါက HTC U11 (အပြာနှင့်အနက်ရောင်ဖြင့်) ကို Sprint မှတစ်ဆင့်ယနေ့ ကြိုတင်၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီးလာမည့်ဇွန်လ ၉ ရက်တွင်ဒေါ်လာ ၂၉ ဒေါ်လာဖြင့် ၂ နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်သည်။ 696 $ စုစုပေါင်း။
၎င်းသည် HTC.com နှင့် Amazon (အပြာရောင်၊ အနက်ရောင်နှင့်ငွေရောင်ဖြင့်) တူညီသောစည်းကမ်းချက်များနှင့်လည်းအခမဲ့ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » ဤသည် HTC U11 အသစ်ဖြစ်ပြီးအကျွမ်းတဝင်ရှိသော်လည်းအသစ်ဖြစ်သည်
Google Allo 11 သည် Google Duo နှင့်ပေါင်းစပ်ရန်ပြင်ဆင်သည်